Moto G5နှင့် Moto G5Plus အစွမ်းထက်သော mid-range အသစ် | Androidsis
Moto G5နှင့် Moto G5Plus သည်အားကောင်းသော mid-range အသစ်ဖြစ်သည်
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Motorola က, မိုဘိုင်း
၎င်းသည် MWC တွင်တင်ဆက်မည့်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်သိချင်တယ် Motorola ၏ mid-range ဗားရှင်းသစ်။ Moto G မော်ဒယ်များသည်သူတို့၏ပထမဆုံးဗားရှင်း မှစ၍ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကစွယ်စုံနဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုတကယ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ဖြစ်တယ်။ စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရ Moto G သည်အကြံပြုထားသည့်ဖုန်းများ၏ထိပ်ဆုံးတွင်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။
1 Moto G သည်ဆက်မွှေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
2 Moto G5၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
3 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Motorola Moto G5Plus ။
Moto G သည်ဆက်မွှေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက Motorola တွင်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်ထင်မြင်ချက်များစွာရှိခဲ့သည်။ Motorola ၏လောင်းကစားကို Lenovo ကစတင်ခဲ့သည်ဂူဂဲလ်၏လက်များကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်စောင့်ဆိုင်းရန်များစွာမစွမ်းနိုင်ပါ။ ဒီနေ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာချောက်ကမ်းပါးနားမှာဆက်ပြီးဘယ်လိုဆက်ပြီးတိုက်နေ ဦး မယ်ဆိုတာငါတို့ပြောနေတာ။
ပုံမှန်ထက် ပို၍ အငြင်းပွားနေသောအလယ်အလတ်တန်းစားပြိုင်ပွဲတွင်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပို၍ ကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်။ Motorola သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်များဖြင့်ကြီးမားသည့် version နှင့်အတူ Moto G5ကိုပြသသည်။ အနည်းဆုံးယူရို ၁၉၉ ကနေစပြီးအသေးဆုံးဗားရှင်းနဲ့စတင်ပါ။ ပြီးတော့ ၂၇၉ ယူရိုကနေအကြီးဆုံးနဲ့အင်အားအကြီးဆုံးဗားရှင်းဖြစ်တယ်.
ထပ်မံ၍ အကြီးမားဆုံးအပြီးတွင် Moto G5သည်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တူညီပေမယ့်အချို့သောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အတူပူဇော်သောဗားရှင်းနှစ်ခု။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ဖန်သားပြင်၏အရွယ်အစားအရမှတ်သားလောက်စရာဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်ဤကွာခြားချက်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Moto G5မိသားစုသစ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ကိုအသေးစိတ်သိခြင်းမှစတင်သည်။
Moto G5၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Moto, G 5
ဖန်သားပြင် IPS LCD5 "FHD (၄၄၁dpi)
Processor ကို Snapdragon 430
GPU ကို 8 × 1.4 GHz ။ C-A53
သိုးထီး2/3GB အထိ
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16GB + MicroSD သုံးထားပါတယ်
နောက်ကင်မရာ 13 Mpx ။ FlashLED နှင့် focal aperture ၂.၀
ဆက်သွယ်မှု 4Mbps နှုန်းဖြင့် 150G
သည်အခြား features တွေ သတ္တုလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ
ရှုထောင့် 144 x ကို 73 x ကို 9.5mm
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ သူတို့မရှိခြင်းကြောင့်အံ့အားသင့်စရာများထင်ရှားသည်။ တူညီတဲ့ပရိုဆက်ဆာကိုဆက်ပြီးလောင်းကစားအပြင်, ဒီပစ္စည်းနှင့်အတူအင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာမပေးပါ။ The သတ္တုလက်ဗွေဖတ်စက် ၎င်းကိုဗားရှင်းအသစ်၏အမာခံအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, ထို Moto G5 နှင့် Moto G5 Plus ၏မျက်နှာပြင်များအကြားအရွယ်အစားအနည်းငယ်ခြားနားသည်.
ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်အရွယ်အစားကမတူတာကကွာခြားတာပါ။ ပိုမိုထိရောက်သော Snapdragon ဗားရှင်း၊ ပိုမိုကြီးမားသောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှု ဒါ့အပြင် Moto G5Plus သည်စွမ်းအားပိုမိုမြင့်မားသောဘက်ထရီကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိသည်လျင်မြန်စွာအားသွင်း။ NFC ဆက်သွယ်မှုလည်းရှိသည်။
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းကွာခြားချက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသည်ရရှိနိုင်သည့်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိရိယာနှစ်ခုလုံးသည်လက်ရှိစျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အကယ်၍ Moto G သည်သင်၏မျက်စိထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသင်၊ ပါဝါ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတို့ကို ထပ်မံ၍ ကြိုက်နှစ်သက်ပါက G5 Plus သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Motorola Moto G5Plus ။
ပုံစံ Moto G5 Plus
ဖန်သားပြင် IPS LCD5.2 "FHD (၄၄၁dpi)
Processor ကို Snapdragon 625
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32GB + MicroSD သုံးထားပါတယ်
နောက်ကင်မရာ 12 Mpx ။ နှစ်ချက် Flash LED ။ ၁.၇ focal aperture နှင့် 1.7k ဗွီဒီယိုများ
ဆက်သွယ်မှု 4Gbps နှင့် NFC စနစ်ဖြင့် 300G
ရှုထောင့် 150 x ကို 74 x ကို 7.7mm
နာမည်ကြီး Motorola Moto G ၏ဗားရှင်းအသစ်များကိုသင်ဘယ်လိုမြင်သနည်း။ အမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် သူတို့တင်ပြတဲ့ဒီဇိုင်းကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ သူတို့ဟာအခြေခံကျတဲ့ (သို့) ထွက်သွားတဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုနည်းနည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် သို့သော် Lenovo မှ Moto G5 အသစ်နှင့်အတူအဆိုပြုသည့်လိုင်းသည်ပထမတစ်ချက်တွင်နှစ်သက်သည်။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အချောသတ်အရည်အသွေး၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်လာမယ့်လတွေမှာဒီ Moto G ရဲ့အသုတ်အသစ်ဟာမျှော်လင့်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်။ သူ၏အရင်လူများသည်အလံကိုအမြဲမြှင့်တင်ကြသည်။ ဒါကြောင့် Motorola ဟာအခုငါတို့မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ terminal အသစ်တွေအများကြီးကိုရောင်းဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ စမတ်ဖုန်းများ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖက်ရှင်သည်ဖက်ရှင်ကျပြီး၎င်းသည်အသင်းဝင်အသစ်များ၏အရည်အသွေးကိုပြသသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကဲ့သို့သော Moto G5သို့မဟုတ် G5Plus အားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုသင်စဉ်းစားမည်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Moto G5နှင့် Moto G5Plus သည်အားကောင်းသော mid-range အသစ်ဖြစ်သည်
ZTE Blade V8၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
Galaxy Tab S3, မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းမှာကြီးသောအင်္ဂါရပ်များ